China ezilahlwayo zomqhaphu itawuli Ukwenziwa kunye Factory | Lonovae
Itawuli elahlwayo yekotoni iqala inguquko yobuso obucocekileyo endaweni yeendlela zesiko. Ithambile emzimbeni wethu kwaye inokuphinda isetyenziswe iphinde igcine izixhobo.
Ukulahlwa kwetawuli yobuso beThayile yethoni yinto elungileyo. Igqibelele ukusombulula ubunzima kwitawuli yemveli yokuthambisa kukhenketho. Kwaye kulula kwaye ucoceko.
Simanzi kwaye somile ukusetyenziswa kwetawuli ngetawuli kungcono kunezinye. Ayinawo umsi omnyama xa itshayo kwaye ayinayo i-fluerscent powder. Ngaphezulu, iyatyeba.
Imveliso igama Alahlwayo umqhaphu itawuli ； Banokubulawa ubuso sula
Umgca （ipatheni Ieperile, umgca we-EF, ilangatye, Intliziyo, ithafa
Ubude bepc nganye 20-22cm
Ububanzi bepc nganye 20-22cm
Ubungakanani roll nganye Ii-100pcs
Gsm umqulu ngamnye Malunga ne-400 g
Izixhobo Umqhaphu, olukiweyo
Ukusetyenziswa Ukucoca ubuso
Ukusetyenziswa Ukhathalelo lwasekhaya okanye ishishini lobuhle
Iitawuli zobuso ezilahlwayo ziimveliso zokucoca ezilahlwayo, ezenziwe ngefayibha yomqhaphu, ukuthamba okuthambileyo, ubulukhuni, kunye ne -int-free. Indlela yokusetyenziswa yahlukile, njengokuhlamba ubuso, ukosula ubuso, ukususa izithambiso, ukukhuhla, njl.njl.
Iitawuli zobuso ezilahlwayo zahlulwe zaziindlela ezimbini: uhlobo lwe roll kunye nohlobo olususwayo. Zintathu iindidi: iperile, iphatheni entle enemingxuma, kunye nepateni ecacileyo. Izitayile ezahlukeneyo zilungele iintlobo ezahlukeneyo zolusu.
Inokusetyenziswa kwakhona ukucoca into ngaphandle kokuhlamba ubuso.
Simanzi kwaye somile ukusetyenziswa kwetawuli ngetawuli kungcono kunezinye. Ayinawo umsi omnyama xa itshayo kwaye ayinayo i-fluerscent powder. Ngaphezu koko, iyatyeba.
Iitawuli zobuso ezilahlwayo zenziwe ngezinto zekotoni, ezineempawu zokungafaki, ukukhutshwa kwamanzi okuqinile, ubhetyebhetye obomeleleyo, kunye nokomelela okuhle. Ngaba iingenelo ezingenakuthelekiswa nanto kwiitawuli. Igumbi lokuhlambela lifumile kwaye limnyama, kwaye itawuli kulula ukufuya iintsholongwane kunye namangolwane kungabangela ulusu nokwaliwa kunye namabala. Itawuli yobuso elahlwayo inexesha elifutshane lokusetyenziswa, inobuhlobo bolusu, ithambile kwaye icocekile, kwaye kulula ukuyiqhuba kuhambo. Sebenzisa inkqubo yokubulala inzala ngobushushu obuphezulu, akukho kongezwa kweekhemikhali kukhuselekile kwaye kucocekile.
Kwaye sisekela umvelisi onobungqongileyo wemveliso engeyiyo ephothiweyo kwi-2019 enje ngetawuli elahliweyo, ilaphu leetafile njl njl.
Egqithileyo PP umgquba Ukususa iibhanti
Okulandelayo: Alahlwayo Kitchen Ukucoca ithawula